Choi Woo Shik ရဲ့ Fan Meeting မှာ လာရောက်အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ Wooga Squad | Asia News Bar
Choi Woo Shik ရဲ့ Fan Meeting မှာ လာရောက်အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ Wooga Squad
July5ရက်နေ့တုန်းက မင်းသား Choi Woo Shik ဟာ အွန်လိုင်းကနေပြီး ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ KakaoTV မှတဆင့် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ fan meeting “A Midsummer Night’s Dream” မှာတော့ Wooga Squad လည်း ပါဝင်အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Wooga Squad ကတော့ Choi Woo Shik အပြင် Park Seo Joon, BTS’s V, Park Hyung Sik နဲ့ Peakboy တို့ပါဝင်တဲ့ နာမည်ကြီးသူငယ်ချင်းအုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Choi Woo Shik ကတော့ မအားလပ်တဲ့ကြားက လာရောက်အားပေးတဲ့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
အချိန်စာရင်းအပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတာ‌ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေထံ မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ Park Seo Joon က “ကျွန်တော်ကတော့ ‘Concrete Utopia’ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို လက်တလောမှာ ရိုက်ကူးနေပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပြီး V ကတော့ “July လ Comeback အတွက် Album အသစ်ထုတ်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်” ဆိုပြီး ပြောသွားခဲ့တာပါ။
နောက်ထပ် မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Park Hyung Sik ကလည်းပဲ “ကျွန်တော်က ‘Happiness’ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးနေပါတယ်” လို့ပြောတဲ့အခါမှာ “Hyung Sik က သူ့ရဲ့ရိုက်ကူးရေး ခဏနားတုန်း ဒီကိုတန်းလာခဲ့တာကြောင့် ပြန်သွားရရှာဦးမှာ.. အခုလိုမျိုး မအားတဲ့ကြားက အချိန်ပေးတဲ့အတွက် တကယ်ကို ဝမ်းသာမိတယ်” ဆိုပြီး Choi Woo Shik က ဖြည့်ပြောရင်း အကုန်လုံးကို ထပ်မံကျေးဇူးတင်နေပြန်ပါတယ်။
Choi Woo Shik ကတော့ အွန်လိုင်းပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲတွေ အများကြီးမလုပ်ဖူးတာကြောင့် ရင်တုန်နေကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ အားလုံးက ဝိုင်းပြီး စနောက်နေကြပါတော့တယ်။ Wooga Squad အနေနဲ့ Choi Woo Shik အကြောင်း ဘယ်လောက်သိထားလဲ,ဆိုတဲ့ အမေးအဖြေတွေကိုပါ ပါဝင်ဆော့ကစားပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့ Choi Woo Shik ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Park Seo Joon ကို ဘယ်လိုနာမည်နဲ့မှတ်သားထားသလဲ,ဆိုတာပါပဲ။ ရီစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ “Driver Park Young Gyu” (အမောင်းသမား Park Young Gyu) လို့ မှတ်ထားကြောင်းပြောတဲ့အခါ အားလုံးအံ့ဩကုန်ကြပါတယ်။
အကြောင်းအရင်းကတော့.. အရင်တုန်းက Choi Woo Shik ဟာ ကားမမောင်းတတ်တာကြောင့် SeoJoon ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီး ဟိုနားဒီနားလိုက်ပို့ခိုင်းတတ်ပြီး အဲ့အချိန်ကတည်းက ‘အ‌မောင်းသမား’ လို့ မှတ်ထားတာပါတဲ့။ ၈ နှစ်လောက်ကြာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ မှတ်ထားတာကိုပြောင်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး,ဆိုပြီး ‌ပြောင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ (Park Seo Joon ရဲ့ မူရင်းနာမည်က Park Yong Gyu ပါ)
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းကို ‌ရွေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အရင်က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Choi Woo Shik က “မရိုးသွားတဲ့မျက်နှာလေး, လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်” ဆိုပြီး ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီအဖြေကို ပြန်လည်ပြသတဲ့အခါမှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း Park Seo Joon က “မင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်? ဘယ်လိုယုံကြည်ချက်ကြီးနဲ့တောင် ပြောချလိုက်တာပါလိမ့်?” ဆိုပြီး စနေပြန်ပါတယ်။ ဒါကိုထောက်ခံတဲ့ V က “ဘယ်က ခန္ဓာကိုယ်တုန်း?” လို့ မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ Choi Woo Shik ကိုယ်တိုင်ကတောင် အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီး…
“ငါ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်? ငါ,ဘယ်တုန်းက ပြောမိလိုက်ပါလိမ့်..(စဉ်းစားရင်း).. ငါ့အထင် ငါပြောချင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာက သရုပ်ဆောင်လို့အဆင်ပြေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံမျိုးကို ပြောချင်တာထင်ပါတယ်” ဆိုပြီး ရီမောရင်း ဖဲ့,နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ဖြေပေးခဲ့ရှာပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ “Parasite” ဇာတ်ကားက Oscar ဆုရသွားတော့ ဘယ်သူက အရင်ဆုံး ဂုဏ်ပြုကြောင်း ပြောခဲ့သလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒါကိုကြားကြားချင်း V က “အဲ့အချိန်တုန်းက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး US ကို ရောက်နေကြတာ.. ကျွန်တော်က ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တာပေါ့” လို့ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ Choi Woo Shik ကတော့ V အပြင် Park Seo Joon ကိုပါ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
“နှစ်ယောက်စလုံးက တချိန်တည်းမှာ ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတယ်။ Seo Joon ကတော့ ကိုရီးယားကနေ လှမ်းပြီး ဂုဏ်ပြုပေးတယ်။ Taehyung ကတော့ US ကနေ ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီး ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်ကို Squad လိုက်ကြီးရောက်ချလာပြီး ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပြုလုပ်သွားကြတာကို ကြည့်ရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့လိုက်ကြီးကို တကယ်အားကျနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
Next ၆ နှစ်ကြာလက်တွဲခဲ့တဲ့ FNC Entertainment နဲ့ လမ်းခွဲဖို့ ပြင်ဆင်​နေတဲ့ Yoo Jae Suk »
Previous « ဒရမ်မာ အတူရိုက်ကူးစဉ်က Park Hyung Sik ကြောင့် ဝိတ်ချခဲ့ရကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ Park Bo Young
၅၇ ကြိမ်​မြောက် “Baeksang Arts Award” ဆု​ပေးပွဲမှာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆုရရှိသွားကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ
Shin Hye Sun ကို ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ လျှို့ဝှက်သည်းဖိုရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့ Kang Tae Oh